किन जाडोमा धेरै रुघाखोकी लाग्छ,... :: डा. विजय खरेल :: Setopati
किन जाडोमा धेरै रुघाखोकी लाग्छ, जोगिने कसरी? (भिडिओसहित)
डा. विजय खरेल नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ
रुघाखोकी लाग्दा के गर्ने?
रुघाखोकीबाट बच्न बाटोमा हिँड्दा समेत धुलोबाट जोगिनेगरी मास्क लगाएर हिँड्नु पर्छ। साधारण खाले रुघा छ भने घरेलु उपायले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
भाइरलको संक्रमण फैलिएको बेलामा विद्यालयमा जाँदा र अन्यत्र हिँड्दा जोगिनु पर्छ। साधारण खाले रुघाखोकीलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। तर रुघाखोकीसँगै नाकबाट पहेलो सिंगान आउने, नाक बेस्सरी बन्द हुने, घाँटीको समस्या आउने, कानमा पनि समस्या छ भने होसियारी अपनाउनुपर्छ। किनकी नाक, कान र घाँटीले एक आपसमा असर पारिरहेका हुन्छन्। बालबालिकाको हकमा त अझै ध्यान दिनुपर्छ।
यदि बालबालिकालाई रुघाखोकी लागेको बेलामा कानमा पनि समस्या देखियो भने चिकित्सककहाँ जानुपर्छ।
रुघाखोकी लाग्दा जे पनि बार्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो गलत हो। रुघाखोकी लाग्दा बारेन भने टाइफाइड हुन्छ भन्ने होइन। झोलिलो र तागतिलो खाना सबै खान हुन्छ। तर एकदमै चिसो चिल्लो पिरो खानु हुँदैन। जुन खानाले अन्यलाई पनि असर गर्छ त्यो खान हुँदैन।
(डा.खरेल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत छन्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २३, २०७६, ११:१८:००